ခက်ခဲသောအချိန်ကာလအတွင်းမှပွဲတော်တစ်ခုBerlinale 2021: - Goethe-Institut
Radu Jude ၏ „Bad Luck Banging or Loony Porn“၊ (၂၀၂၁) ခုနှစ် Berlinale ၊ပြိုင်ပွဲ။ | ဓါတ်ပုံ။ ။ © Silviu Ghetie / microFilm
မတ်လတွင်ကျင်းပသောဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းပွဲတော်တစ်ခု၊ ဇွန်လတွင်မှပါဝင်ခွင့်ရသောပရိသတ်။ ။ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောရောဂါကြောင့် ယခုနှစ်၏ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) ကိုအစဉ်အလာနှင့်မကိုက်ညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကျင်းပရပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျင်းပသည်ဟူသောအချက်သည် အရေးကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
အနုပညာရှင်များမရှိ၊ ကောဇောနီမရှိနှင့် အားလုံးထဲမှာမှ ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့တွင်လူအုပ်ကြီးလည်းရှိမနေပေ။ ပွဲတော်ကိုထူးခြားစေသည့် မရှိမဖြစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောပရိသတ်များမပါဘဲ ယခုနှစ်၏ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) ကိုမတ်လတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူထု‌ပွဲတော်ကြီးသည် လူပုံအလယ်တွင်မကျင်းပခဲ့ရဘဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းတွေ့ဆုံပွဲအဖြစ်စတင်ခဲ့ရပြီး လပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် ဇွန်လတွင်မှ ပရိသတ်ရှေ့မှောက်ရောက်ရှိလာရသည်မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပွဲတော်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ။Carlo Chatrian နှင့် Mariette Rissenbeek တို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်း လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရသည့်ပွဲတော်ကိုကျင်းပနိုင်ရန် အချိန်အကြာကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ (၂၀၂၀) ခုနှစ်အဆုံး၌ ရှောင်လွဲ၍မရသော ဒုတိယကြိမ်မြောက် လော့ခ်ဒေါင်းကာလမတိုင်ခင်အချိန်လေးတွင် အစဉ်အလာအတိုင်းလုပ်မည့်ဖေဖော်ဝါရီလရက်စွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်ပြင်ဆင်စီစဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ မတ်လတွင် အတတ်ပညာရှင်ပရိသတ်သီးသန့်သာလက်ခံမည့် ‘လုပ်ငန်းပွဲစဉ်’ ကိုရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲအပါအဝင် ပွဲတော်အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို လေလှိုင်းပေါ်မှထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကနှင့်တရားဝင်ခန့်အပ်ထားသောဂျာနယ်လစ်များက ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်တွင်ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မတ်လတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ယောက်ပါဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့သည် Bear ဆုတံဆိပ်အတွက် ၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကြေညာပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရှိရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပရိသတ်အမြောက်အမြားအတွက် ရုပ်ရှင်များကိုရုံတင်ပြသမည့်နွေရာသီတွင် ဆုပေးပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသောအချိန်ကာလအတွင်း ခက်ခဲသောစီစဉ်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာများမှာအဘယ်နည်း။ ပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအွန်လိုင်းပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်လက်မှတ်များရောင်းချရမည်လား။ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များ၏စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်သည့် (A) အဆင့်ရှိပွဲတော်တစ်ခုအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ချေ။ ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) ကို အစီအစဉ် လုံးဝဖျက်လိုက်ရမည်လား။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများသည် “သူတို့၏ရုပ်ရှင်များအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြသောကြောင့်” ထိုအချက်သည် မည်သည့်အခါမျှ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း Rissenbeek ကအတိအလင်း ကြေညာခဲ့သည်။
အားလုံးထဲတွင်မှ ဥရောပရုပ်ရှင်ဈေးကွက် (EFM) သည် လုပ်ငန်းပွဲစဉ်၌ အဆိုပါပလက်ဖောင်းကို အတိအကျကမ်းလှမ်းပေးထားသည်။ ကဏ္ဍအများစုကို အများပြည်သူကသတိထားမိခြင်းမရှိသော်လည်း ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်သည် ဘာလင် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) နှင့်အပြိုင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ရှင်ဝယ်ယူသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးပါသောအရောင်းအဝယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်များကိုရောင်းချကာ မူပိုင်ခွင့်များကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြသည်။ တစ်နှစ်တာ၏ပထမဆုံးဈေးကွက်အဖြစ် EFM သည် (မေလတွင်ကျင်းပသော) ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ Marché du ရုပ်ရှင်၊ (နိုဝင်ဘာလ) California ပြည်နယ်၊ Santa Monica တွင်ကျင်းပသော အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ဈေးကွက် (AFM) တို့နှင့်အတူ ရုပ်ရှင်လောက၏အရေးပါဆုံးတွေ့ဆုံမှုသုံးခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ EFM သည် (၂၀၂၁) ရုပ်ရှင်နှစ်တစ်ခုလုံးအတွက်သာမက ထိုထက်ပို၍ပင်အရေးပါလှသည်။ ဘာလင်မြို့၏ ပွဲတော်များကို ၎င်းမပါဘဲကျင်းပရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
ထို့ကြောင့် ပွဲတော်ကို လိုအပ်သောကန့်သတ်ချက်များဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရန် ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) သည်အခက်ခဲဆုံး အချိန်များတွင်ပင် ကိုယ်တိုင်ဂရုမူလေးစားစေရန် ထိုဓလေ့များကို မည်သို့ကြိုးပမ်းထားကြောင်းဖော်ပြသည့် နောက်ထပ် သာဓကတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ (၇၁) ကြိမ်မြောက် ဘာလင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (Berlinale) အတွက် ရုပ်ရှင်ပေါင်း (၆၃၁၈) ကားကိုအဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြပြီး ယခင်နှစ်ထက် အရေအတွက် (၄၈၀) သာ လျော့နည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးသတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စီမံချက်အတွင်းရှိ ရုပ်ရှင်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း (၄၀၀) ဝန်းကျင်ရှိသော်လည်း တာဝန်ခံများက ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း (၁၁၆) ကားကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Joana Hadjithomas နှင့် Khalil Joreige ၏ „Memory Box“ ၊ (၂၀၂၁) ခုနှစ် Berlinale ၊ပြိုင်ပွဲ | ဓါတ်ပုံ။ ။© Haut et Court - Abbout Productions - Micro_Scope
ပြိုင်ပွဲသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်တင်ဆက်မှုစုစုပေါင်း (၁၅) ခုကိုကျင်းပပေးသည်။ မက္ကဆီကန်ပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်၊ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တစ်ကား၊ ဂျပန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားနှင့် အီရန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားတို့မှလွဲ၍ ၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့် ဥရောပရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးများဖြစ်ကြသည်။ ယခုနှစ်ကဲ့သို့ လျှော့ချရေးလုပ်ရသည့်နှစ်မျိုးတွင် USA လုံးဝမပါချေ။ ယခုနှစ်၏ပြိုင်ပွဲသည် ယခင်နှစ်၏ပြိုင်ပွဲနှင့်ယှဉ်လျှင် “မှုန်မှိုင်းမှုပိုနည်း” ကြောင်း Carlo Chatrian ကဒစ်ဂျစ်တယ် အစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွင် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏စိတ်ဖိစီးဖွယ်အခြေအနေကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများက ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီးအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြကြောင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်လေးခုနှင့်အတူ ဂျာမနီသည် အားကောင်းသောထုတ်ဖော်ပြသမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ဆုများစွာရရှိခဲ့သောအခန်းဆက်ဇာတ်လမ်းတိုဖြစ်သည့် Unorthodox ကိုဖန်တီးသူ Maria Schrader သည် သူ၏သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Ich bin dein Mensch/ I’m Your Man အတွက်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး Maria Speth သည် သူ၏ရေရှည်ကြည့်ရှုလေ့လာမှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Herr Bachman und seine Klasse/ Mr.Bachman and His Class အတွက်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၉၃၀) ခုနှစ်များက ဘာလင်မြို့အကြောင်းကိုရေးသားထားသည့် Dominik Graf ၏ဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ရိုက်ကူးထားသော Fabian oder Der Gang vor die Hunde / Fabian – Going to the dogs နှင့်သရုပ်ဆောင် Daniel Brühl ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကိုယ်ရေးအထုပ္ပတ္တိဆန်သောပွဲဦးထွက် Nebenan / Next Door ဘာလင်ရုပ်ရှင်နှစ်ကားသည်လည်း Bears ဆုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။
Introduction ကို Hong Sang-soo ကဘာလင်မြို့တွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသရိုက်ကူးသွားခဲ့သည်။ ရေပန်းစားနေသောကိုရီးယားလူမျိုးဒါရိုက်တာသည် On the Beach at Night Alone ဇာတ်ကားဖြင့် (၂၀၁၇) ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိသားစုဆီသို့အလည်သွားချင်သောလူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ကူးထားသည့် အိမ်ပြေးရုပ်ရှင် အမျိုးအစားဖြစ်သော Introduction သည် သူ၏ (၂၅) ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။
Hong Sang-soo ၏ „Introduction“ ၊(၂၀၂၁) Berlinale ၊ပြိုင်ပွဲ။ | ဓါတ်ပုံ။ ။ © Jeonwonsa Film Co.Production
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းအတွက် (၂၀၁၉) ခုနှစ်၏ဥရောပရုပ်ရှင်ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည့် Portrait ofaLady on Fire / Portrait de la jeune fille en feu ကိုရိုက်ကူးခဲ့သော ပြင်သစ်လူမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Céline Sciamma သည်လည်း ပြိုင်ပွဲတွင် ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းအရေးပါသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင် Sciamma သည် သူ၏ရင့်ကျက်လာမှုပြဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Tomboy ဖြင့် Berlinale ၏ Panorama ကဏ္ဍကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် သူ၏ကလေးဘဝဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည့် Pertite Maman (အဓိပ္ပာယ် - မိခင်ငယ်လေး) ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ပြိုင်ပွဲထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
ယခင်က BEAR ဆုရရှိခဲ့သူများ
ယခင်က BEAR ဆုရရှိသူအချို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ရိုမေးနီးယမ်းလူမျိုးဒါရိုက်တာဖြစ်သည့် Radu Jude (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Aferim! ဖြင့် Silver Bear ရရှိ) သည် Bad Luck Banging or Loony Porn ဖြင့် ပြိုင်ပွဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သည် ပေါက်ကြားသွားသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှုများကို ထင်ဟပ်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် ဟန်ဂေရီသို့ Just the Wind အတွက် Silver Bear ဆုကိုယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သည့် Bence Fliegauf ရိုက်ကူးထားသော Forest - I See You Everywhere တွင် Budapest မြို့မှ နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ချစ်သံယောဇဉ်များအကြောင်းဆက်စပ်မှုမရှိဟုထင်ရသောဇာတ်လမ်းများကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားသည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း Berlinale သည် အထင်ကရပွဲတော်များထဲတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်ဟူသော ပြောဆိုချက်နှင့်ကိုက်ညီနေဆဲဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Alonso Ruizpalacios (Museum ရုပ်ရှင်၏ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းအတွက် (၂၀၁၈) ခုနှစ် Silver Bear ဆု) သည် Mexico နိုင်ငံရှိ ရဲလုပ်ငန်းအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပေါင်းစပ်ထားသောရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် A Cop Movie ကိုပြသနေသည်။ သေမိန့်ပေးခြင်းအကြောင်းရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ကားကို အီရန်မှထပ်မံတင်ဆက်ထားသေးသည်။ Maryam Moghaddam နှင့် Behtash Sanaeeha တို့ရိုက်ကူးထားသည့် Ballad ofaWhite Cow သည်မတော်မတရားကွပ်မျက်ခံလိုက်ရသည့် အမျိုးသားတစ်ယောက်၏ဇနီးဖြစ်သူအကြောင်း ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင်သာ အီရန်လူမျိုး Mohammad Rasoulof သည် There is No Evil ရုပ်ရှင်အတွက် Golden Bear ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ Rasoulof သည် ယခုနှစ်တွင် Bear ဆုရရှိဖူးသူခြောက်ဦးပါဝင်သည့်နိုင်ငံတကာဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
German-Georgian တွဲဖက်ထုတ်လုပ်ရေး Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? / What Do We See when We Look at the Sky? ပြိုင်ပွဲသို့ဝင်ရောက်လာသောအချက်သည် အနည်းငယ်အုတ်အော်သောင်းတင်းဖြစ်သွားသည့်သဘောသက်ရောက်နေသည်။ Georgia မှ Alexandre Koberidze ၏မှော်ဆန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းသည် Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin/DFFB ကျောင်းတွင်ဘွဲ့ရခဲ့သောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်မျိုးအတွက် Berlinale ကဲ့သို့ A အဆင့်ရှိ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်စာလျှင် Max Ophüls Preis ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြသခြင်းက ပို၍ကောင်းမွန်နိုင်သည်။
Alexandre Koberidze ၏ „What Do We See When We Look at the Sky?“ ၊(၂၀၂၁) ခုနှစ် Berlinale ၊ပြိုင်ပွဲ။ | ဓါတ်ပုံ။ ။ © Faraz Fesharaki/DFFB
ပွဲတော်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ကွဲပြားစုံလင်မှုရှိပြီးရဲဝံ့မှုရှိသောပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကို အတူတကွပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်၍ပြောနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Golden Bear ဆု သို့မဟုတ် Silver Bear ဆုကို မည်သူက ဆွတ်ခူးသွားကြောင်းကြည့်ရန် စောင့်မျှော်နိုင်သည်။ သို့သော် အဓိကကျသောကဏ္ဍတွင် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိနေပါ။ French Exit တွင် Michelle Pfeiffer ၊ Best Sellers တွင် Michael Caine ၊ Tina မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် Tina Turner ၊The Mauritanian တွင် Jodie Foster နှင့် Sherlock သရုပ်ဆောင် Benedict Cumberbatch တို့ကို Berlinale Specials တွင်သာတွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Berlinale ကသာ ဇွန်လတွင် ဘာလင်မြို့သို့ ဤအနုပညာရှင်များနှင့်အတူ အချိန်အတော်ကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည့်စွဲမက်ဖွယ်ရာပွဲတော်ခံစားချက်ကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်လျှင် မည်မျှဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကောင်းလိုက်မည်နည်း။ အကယ်၍ အစီအစဉ်သာဖြစ်မြောက်ခဲ့လျှင် Summer Berlinale သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ ဤနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာ Mariette Rissenbeek သည် “ခမ်းနားသော ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီး” ကိုမျှော်လင့်ထားပါသည်။ မည်သူကများ သူနှင့်အငြင်းအခုံပြုလုပ်လိုမည်နည်း။
Ula Brunner သည် ဒေသတွင်းအသံလွှင့်ဌာန Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ၏တည်းဖြတ်သူတစ်ဦး၊ ဂျာနယ်လစ်နှင့် redaktion.brunner ၏အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန် : ထက်ငြိမ်းခန့်
မူပိုင်ခွင့် : Text: Goethe-Institut, Ula Brunner. This work is licensed underaCreative Commons Germany Attribution – NoDerivs 3.0 Germany license.